Macluumaadka ku geynaya Excel iyo Spreadsheets Google
Guud ahaan, in la gooyo macneheedu waa in la gooyo shayada adoo si gooni u goynaya - sida laanta la jarjaray ee geedka. Barnaamijyada faafinta sida Excel iyo Google Spreadsheets, labadaba iyo qoraalka labadaba waa la jaraa. Sababaha aad u sameyn lahayd waxaa ka mid ah:
taasoo fududeyneysa in la fahmo xogta - sida hoos u dhigista tirada jajab tobanle ah ee ku jira lambar dheer;
sameynta qalabka loo isticmaalo - sida xadaynta dhererka xogta qoraalka ah ee lagu qori karo goob macluumaad ah .
Kala-wareegidda iyo is-xoqidda
Inkasta oo labadaba hawlgallada ay hoos u dhigayaan dhererka lambarrada, labaduba way ku kala duwan yihiin wareegaas waxay beddeli karaan qiimaha tirooyinka ugu dambeeya ee ku saleysan xeerarka caadiga ah ee tirooyinka tirooyinka, halka farshaxanimadu aysan ku lug laheyn wareega ah iyada oo aan loo eegin waxa ay tahay lambarka ugu dambeeya.
Tusaala aad u badan oo ah lambarka soo koobaya iyo / ama la gooyey ayaa ah Pi oo joogto ah. Maadaama Pi uu yahay lambar aan sax ahayn (oo aan joojin ama ku celin), markaad ku qorto qaabka jaantuska, waxay sii wadi doontaa waligeed. Si kastaba ha noqotee, qorista lambar aan marna dhicin ma aha wax la taaban karo sidaa daraadeed qiimaha Pi ayaa la gooyaa ama la isku soo duubaa marka loo baahdo.
Dad badan, haddii la waydiiyo qiimaha Pi, si kastaba ha ahaatee, jawaabta 3.14 - midka laga barto fasalka xisaabta. Muuqaalka Excel ama Google Spreadsheets, qiimahaas waxaa lagu soo saari karaa iyadoo la isticmaalayo adeegga TRUNC - sida lagu muujiyey labada xaraf ee tusaalaha kor ku xusan.
Isku-jaridda Xogta Numerka ah ee Excel iyo Spreadsheets Google
Sida ku xusan, hal hab oo lagu soo gooyo xogta Excel iyo Google Spreadsheets waa iyada oo la adeegsanayo hawlaha TRUNC . Halka uu lambarkiisu soo gooyo waxaa lagu go'aamiyaa qiimaha lambarka Lambarka Dukumiintiga ( tirada gaaban ee tirada lambarada). Tusaale ahaan, gudaha B2-ga qiimaha of Pi waxaa loo jaray qiimaha caadiga ah ee 3.14 adoo dejinaya qiimaha Num_digits ilaa 3
Doorashada kale ee lagu tirtirayo tirooyinka togan ee miisaaniyadu waa shaqada INT waxay mar walba ku dhejisaa tirooyinka hoos u dhejinta, taas oo la mid ah tirooyinka farshaxan ee jaangooyooyinka - sida lagu muujiyay safka sadex iyo afar ee tusaalaha.
Faa'iidada isticmaalka habka INT waa inaan loo baahnayn in la sheego tirada lambarrada maaddaama hawshu marwalba ka saarayso dhamaan qiimaha tirada.
Qaadista Macluumaadka Qoraalka ee Excel iyo Spreadsheets Google
Marka lagu daro tirooyinka soo gaabinta, waxa kale oo suurtogal ah in la soo koobo xogta qoraalka. Go'aanka meesha lagu gooyo macluumaadka qoraalka wuxuu ku xiran yahay xaaladda.
Xaaladda xogta la soo dhoofiyo, kaliya qayb ka mid ah macluumaadka ayaa laga yaabaa inay ku lug leedahay ama, sida kor ku xusan, waxaa laga yaabaa inay xadidan tahay tirada jilayaasha loo geli karo beerta.
Sida lagu muujiyay safka shan iyo lix ee sawirka kore, xogta qoraalka ah oo ay ku jiraan calaamadaha aan loo baahnayn ama qashinka qashinka ayaa la jarjaray iyadoo la adeegsanayo LEFT iyo RIGHT functions.
Qalad qalafsan waa qalad uu sababay isticmaalka lambarka tirooyinka ku jira xisaabinta. Iyada oo ku xiran tirada lambarrada ku lug leh, waayo, xisaabinta buuga ku lug leh waxay noqon kartaa mid aan muhiim ahayn.
Xaaladda xisaabinta kombiyuutarka ee ku lug leh xogta tiro badan oo ah jajab tobanle ayaa qalad noqon kara.
Qiyaasaha todoba iyo siddeedaad ee tusaaluhu waxay muujinayaan farqiga u dhaxeeya marka la isku dhufto tiro tirad ah oo aan la tirin 100.
Raadinta Qiimaha celceliska leh Hawlaha Awoodda Muuqaalka ee Excel
Excel AVERAGEIF: Raadi celceliska Shaxda Khaaska ah
Tirinta Maalmaha Inta u dhaxaysa Taariikhda Google ee Calaamadaha
Isticmaalida Goolka Muuqaalka ee Excel
Sidee loo sameeyaa Jaantuska Suuqa Sare ee Sare
Beddelaan Widths iyo Row Heights ee Excel iyo Google Spreadsheets
Foomka Foomka Foomka Excel: Nuqul Ka Dhex Dhex Gala Noocyada
U dhaqaaqo inta u dhaxaysa Furan furan oo leh Alt + Tab Switching
Aniga Gusta Meme From Comics Rag
Sida loo sameeyo wicitaanada adoo adeegsanaya website-ka Amazon
Maxaa loola jeedaa OOAK?
Saving Your PSOne Classic iyo PS2 Cayaarahaaga PS3
Waxaad jeceshahay inaad ku qorto Game Microsoft All-Stars
Sida Loo Abaabulo Dhacdooyinka Taariikhda Google Ka soo Gmail Farriin
Waa maxay Wetware?
Fahmitaanka Cabirka Qalabka SMTP
Sida loo doorto GPS-ga
Ka ilaali naftaada SMiShing (Xayeysiiska SMS SMS) Weerar
9 Dhalinyaro 3 Xaaladood oo Adkee Lahaa
'Sims 2: Jaamacada' Green Packs Expansion Pack
Sida loo dhiso biilka Windows Mail Address Book si toos ah
LG 65G6P 4K Ultra HD OLED TV wuxuu ku guuleystey 2016-ka Tartanka TV-ga
Sida loo wadaago Dukumintiyada Rasmiga ah ee AOL
Tafatir mawduucda Email-ka La Helay ee Windows Live Mail
Tilmaamaha Cinwaanka Tikidka